Gentamycin sulphate 10% duray - Shiinaha NCPCVET
xal la isku duro
NAME: Gentamycin sulphate 10% TIRADA duritaanka: Gentamycin sulphate duritaanka ml kasta waxa ku jira Gentamycin qof 100mg sulphate: Biyuhu ama ku dhawaad ​​Biyuhu dareere cad. Pharmacological: saamaynta pharmacological of alaabta this on noocyo kala duwan oo bakteeriyada garaam-negative (sida E. coli, Klebsiella, Proteus, Pseudomonas aeruginosa, Pasteurella, Salmonella, iwm) iyo Staphylococcus aureus (oo ay ku jiraan wax soo saarka β- amide nooc fangas gudahood) ayaa saamayn bakteeriyada. streptococci intooda badan ...
Gentamycin sulphate duritaanka
ml kasta waxa ku jira Gentamycin 100mg sulphate
Biyuhu ama ku dhawaad ​​Biyuhu dareere cad.
saamaynta pharmacological of alaabta this on noocyo kala duwan oo bakteeriyada garaam-negative (sida E. coli, Klebsiella, Proteus, Pseudomonas aeruginosa, Pasteurella, Salmonella, iwm) iyo Staphylococcus aureus (oo ay ku jiraan wax soo saarka β- amide nooc fangas gudahood) saamayn bakteeriyada . streptococci intooda badan (pyogenes Streptococcus, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus faecalis, iwm), bakteeriyada anaerobic (Bacteroides ama Clostridium), tuberculosis, rickettsial iyo fangaska adkaysi u kiimikada.
Loo isticmaalo septicaemia, cudurada Fistula, caabuqyada neef-mareenka, caabuqyada iyo mindhicirka (oo ay ku jiraan peritonitis), cudurada biliary mareenka, naaso iyo maqaarka iyo cudurada unugyada jilicsan, oo aan u nuugo afka, loo isticmaalo cudurada caloosha.
si ay u keeni cillad vestibular badan yahay, laakiin sidoo kale waxay keeni sumoobo kelyaha karo, taas oo ay raasamaal ee kiliyaha kelyaha la xiriira. cadaanyo Marmarka.
cat wuu ka nugul yahay in kiimikada, geysid keeni kartaa lallabo, matag, dhareerka, iyo ataxia.
muruqyada saamaynta xannibaya badanaa keena xaddi badan u keeni. Cats, eeyaha qaliin suuxinta guud, isticmaalka wadajirka ah ee penicillin, streptomycin si looga hortago cudurka marka, inta badan dhimashada lama filaan ah, taas oo ay sabab u tahay suuxinta guud iyo relaxant muruqa ah si kor loogu qaado saamaynta go'doominta muruqyada.
isticmaalka muddada dheer waxay keeni kartaa dhaawac kelyaha.
Mid ka mid ah dose, 2 ~ 4mg halkii miisaanka jidhka xoolaha, 3 ~ 5mg waayo, eyda iyo bisadaha, laba jeer maalintii
, 2 ~ 3days joogto ah.
Waxaa lagu dari karaa daaweynta carbenicillin of oofwareen aad u daran, laakiin waxaa jira incompatibility giisa.
Alaabta Tani weheliso penicillin, Streptococcus saamayn hammiga.
Hayso murugada neefsashada, ma duro xididka.
Duritaanka Gentamycin (isticmaalka xoolaha oo kaliya)
ml kasta waxa ku jira 100mg Gentamycin
10ml / 20ml / 50ml / 100ml per weelka
Cattle, haadda, Idaha, Horse, Doofaar, Cow, geela, Dog, Cat.
Caloosha iyo mindhicirka iyo caabuqyada neef ay keento bakteeriyada gentamycin xasaasi ah, sida E. coli, Klebsiella, Pasteurella iyo spp Salmonella., In weylood, xoolaha, riyaha, idaha iyo doofaarka.
Waayo, maamulka muruqyada dhexdooda Guud: Labo maalin kasta 1 ml. per 20 - 40 kg. miisaanka jidhka muddo 3 maalmood ah.
shayga Gentamycin sulphate 10% isku duro
MAGACA SOO SAARKA Gentamycin sulphate duro
sinji Gentamycin sulphate duritaanka ml kasta waxa ku jira Gentamycin 100mg sulphate
tilmaan Gentamycin sulphate duritaanka loo adeegsaday septicaemia, cudurada Fistula, caabuqyada neef-mareenka, caloosha iyo mindhicirka infections (oo ay ku jiraan peritonitis), cudurada biliary mareenka, naaso iyo maqaarka iyo jilicsan
cudurada unugyada, non-nuugo afka, loo isticmaalo cudurada caloosha.
Qiyaasta IYO MAAMULKA Gentamycin sulphate duritaanka duridda
CATEGORY Gentamycin sulphate duritaanka daroogada bakteeriyada
Soo WAKHTIGA Gentamycin sulphate duritaanka Doofaaro: 40days
Digtoonidiinna Duulana Gentamycin sulphate duritaanka Alaabta Tani waxay leedahay saameyn la mid ah niyad-jabka neefsashada, waxa aan la intravenously duri karaa
YOOLKA Xoolaha Gentamycin sulphate duritaanka lo 'ido doofaarka
Previous: Flunixin Meglumine duritaanka
Next: Iron Dextran duritaanka
Xayawaanka jeermiska Iodophor
Animal Niutrition Cuntada dheeriga ah
bakteeriyada Drugs Waayo Xayawaanka
Best Iibiyaha Veterinary Medicine
jeermiska Waayo Xayawaanka
duritaanka Waayo, xoolaha
xoolaha iyo digaagga Drugs Gaarka ah
digaag Veterinary Medicine
Veterinary Medicine Animal Digaag Medicine
Miisaanka Gainer Waayo, xayawaanka
Kahortaga shubanka Dhir Powder
Iron Dextran duritaanka
Lincomycin hydrochloride duritaanka